နှစ်ကူးသဝဏ်လွှာ (2011-2012) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှစ်ကူးသဝဏ်လွှာ (2011-2012)
Posted by thit min on Dec 29, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 28 comments
စိတ်သစ်လူသစ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဒီနေ့ ၂၉ ရက်နေ့မှာဘဲ
ကျနော် တို့တွေ ဘဝအမျိုးမျိုး စိတ်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နှစ်ဟောင်းကို ပိုကောင်းသော
နှစ်သစ်ဖြစ်သွားအောင် ပြုပြင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းအောင် နေတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက်အလုပ်ခက်ပါတယ်။
ငါ ငါ ဆိုတဲ့ မာန ဟာ လူ တယောက်ကိုရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လှပါတယ်။
နှိမ့်ချတတ်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတပါးဆိုတဲ့အတိုင်း မာနကင်းတဲ့သူဟာ ရုပ်မလှပေမဲ့စိတ်လှပါတယ်။
ကျနော် တချိန်က မာနကြီးတဲ့ လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကိုယ်နဲနဲသိတာ တတ်တာလေးကို
နွားခြေရာကွက်ထဲက ရေကို ပင်လယ်ထင်တဲ့ဖားသူငယ်လို ခြေသလုံးက သွေးနားထင်ကိုရောက်ခဲ့တာမျိုးပါ။
ကိုယ့်ထက် ဂုဏ်အားဖြင့်အသက်အားဖြင့်ကြီးသူများကိုလည်း နှုတ်နဲ့ စော်ကားမော်ကားပြောဘူးပါတယ်။
ဘာသိလို့လဲ၊ ငါ့လောက်သိလို့လားပေါ့ အဲဒီလို ပုံစံမျိုးတွေပါ။
ဘာမှပြန်မပြောတာကိုတောင် ငါဟုတ်လှပြီလို့ ထင်ခဲ့ရတဲ့ အမိုက်အမဲပါ။
လူတော်တော်များများက သိပေမဲ့ မပြောရဲတာကို၊ အဖတ်လုပ်ပြီးမပြောတာကို အဟုတ်ထင်နေခဲ့တာပါ။
တဘက်က ပြန်ကြည့်ရင် ကျနော်ဟာကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။
အနစ်နာခံခဲ့ရတယ်။ အပျော်အပါးတွေကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်။ အချိန်ကိုတန်ဖိုးထား အားထုတ်ခဲ့ရတယ်။
ရလာတော့ “ငါကွ” တဲ့။ ငါ့လောက် “တန်ခိုးမကြီးတန်ရာ” တဲ့။ ငါမှ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာတဲ့။
ဆင့်ကျင်ငယ် ပင်လယ်ထင်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ် ကောင်ဖြစ်ခဲ့တာ။
ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ လူတွေကကြိတ်မုန်းတာ ခံခဲ့ရတယ်။ဘယ်သူကမှတော့ “ရန်ဖြစ်ခံ”ပြီး အမုန်းခံပြီး
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောကြမဆုံးမကြတော့ လူကောင်းဖြစ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းလာဖို့ ပြင်နိုင်ဘို့
အချိန် တွေ ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာအမှန်ပါဘဲ။
ဘဝအတွက် ကောင်းသော မိတ်ဆွေများ၊ ကောင်းသောသင်ယူမှုများကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဟာကို ကြိုးစားတတ်တဲ့ စိတ် ဇွဲကြီးတဲ့ စိတ် ဝိရီယစိတ်တွေ ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ “မာန” တံတိုင်းက
“ရလာဒ်” တွေ ကို အားနဲစေခဲ့တာ လက်တွေ့ပါဘဲ။
နောက်တော့ ဘဝပေးအခြေအနေအရ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ လောကထဲကလူတွေနဲ့ပါတ်သက်ဆက်
ဆံလာရတယ်။ လူအမျိုးမျိုးကိုတွေလာရတယ်။ လူချမ်းသာပေမဲ့ စိတ်မချမ်းသာရသူတွေ။
ချမ်းသာသလောက် စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ (ကောင်းသောအကြောင်းအရာမလို့
ကျော်မျိုးထွန်း) သဋ္ဌေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ တခြားသူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
နောက်တော့ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်း ပေါ့။ ဟိုတုန်းကတည်းက အမေရိကန်ပြန်ဆရာကြီးတွေ
ပါမောက်ခကြီးတွေနဲ့ အနီးကပ်နေခွင့် အတူတူသွားလာ ခွင့်လေးတွေ ရခဲ့ရတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်တွေကို
ငါလို မြေမှုန့်မြေမွှား က သူတို့လိုတောင်ကြီးတွေလောက်တောင် ရို့ကျိုးချင်းမရှိပါလားလို့
ခံစားလာရတယ်။ နောက်တော့ နိုင်ငံခြားကိုရောက်လာတယ်။
ဒီကျ ပိုဆိုးသွားပြီ။ သူကြီး ဦးခိုင်ပြောသလို ဘီလီယံချီပြီး ချမ်းသာတဲ့ သူဌေး ကိုယ်တိုင်အိမ်သာ
Standford University-စတဲန်းဖို့ က ပြီးတဲ့ ကျနော်ဆရာပါမောက်ခ ကမြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံကလာတဲ့
ကျနော်ကိုလူကြားထဲမှာအရေးပေးဆက်ဆံတာခံရတော့ “မာန” စိတ်တွေနဲ့ “ငါ” ဟာ နောင်တတွေနဲ့ပေါ့။
ဝမ်းလဲဝမ်းသာသလို ကိုယ့်ရဲ့အားနဲချက်တွေကိုပါမြင်လာတယ်၊ ပြင်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့။
ပြောရရင်ဗျာ။ ကျနော် ဆီမီနာ(၂)မှာ အကျင့်တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
အကျင့်ဆိုတာ ဥပဒေမဟုတ်လေတော့ မလိုက်နာလဲ နေလို့ရနေတာမျိုးလေ။
အဲဒီတော့ လူတွေအလွယ်တကူဘဲ ချိုးဖောက်နေကြတာဘာဆန်းမှာလဲ။
နောက်တခုကတော့ ကျနော် “စံ” တွေကိုပြောပြထားတာပါ။
တကယ်တော့ “စံ” ဆိုတာကောင်းမှန်းလူတိုင်းသိပါတယ်။လုပ်ချင်မှလုပ်နိုင်အုန်းမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွေ့ဘဝအခြေအနေကနေ စ ပါနော်။ ကိုယ်လုပ်နိုင်ရင်လုပ်နိုင်သလောက်ကောင်းမယ်ဆို
တာသိရင်ပြီးတာပါဘဲ။သူများနဲ့ နှိုင်းပြီးတော့လည်း စိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူး။
ကျနော့ ကော်မန့်လေးလို ကိုယ့်စိတ်ကူးဂရပ်လေးကိုယ်ဆွဲပါဒီနေ့ထက်မနက်ဖန်တိုးတက်မယ်ဆိုရင်
ဝမ်းသာပါ။ အုတ်ခဲတလုံးချင်းကနေ ဗိမာန်ကြီး တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တွေ ကိုယ့်ကိုကို စိတ်ဓာတ်တွေ၊ တရားမျှတတဲ့ရုပ်ပိုင်းတိုးတက်မှုတွေ ၂၀၁၂
ကျနော်တို့အားလုံးချစ်တဲ့ ဂေဇက်ကိုလည်း မနေ့ကထက်ဒီနေ့ မနှစ်ကထက်ဒီနှစ်
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ကိုသစ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက
ဟာသတွေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Stress တွေကို လျှော့ချပေးသူ၊
ကဗျာတွေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေကို ကြည်နူးချမ်းမြေ့စေသူ၊
ဂျပန် ဘာသာပြန်ဝတ္ထုလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခံစားနိုင်စွမ်းကို နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ပေးသူ၊
ရသစာစုလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေသူ၊
ဆီမီနာတွေလုပ်ပြီး အသိပညာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို လက်တွဲခေါ်ယူသူ
အဲဒီလူဟာ သစ်မင်း ပါ။
၂၀၁၂ မန်းဂဇက်မှာ ကျွန်ုပ်ဘလက်ရဲ့ ဘက်လိုက်မှုမပါသော ရွေးခြယ်မှုအဖြစ်
ကိုသစ်မင်း သည်သာ တန်ဘိုးအကြီးဆုံး စာရေးသူဖြစ်ပါကြောင်း တရားဝင် ပြောခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
ဒါ ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်းရဲ့ အကြိုက်ကို ပြောတာပါ။
၂၀၁၂ ဟာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံသော နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါစေ ကိုသစ်ရေ။
၂၀၁၂ အတွင်း ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ကိုသစ်မင်းရဲ့ ပို့စ်လေးကတော့
“Midlife Crisis ကို အကြံပေးကြည့်ခြင်း” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါဗျာ။
ဒါ ကျွန်တော့် အကြိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ကြီးတွေ အကြိုက်ပါ။
ရွာထဲက ချာတိတ်ကာလသား၊ ကာလသမီးတွေ နဲ့ တော့ တူချင်မှ တူမှာပါ။
ကိုဘလက်လိုတော့ ကျွန်တော် မပြောတတ်လို့ပါ
အားလုံးကို ကြိုက်ပေမဲ့ ၊ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကိုသစ် ပါပဲ
ကိုသစ် ရဲ့ ရွာအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ ၊ စေတနာ တွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ကိုသစ်ပြောပြတော့..ကျနော်တို့ လို မြူမှုန်လေးတွေ ပိုလို့ ရှက်ဖွယ်ပါပဲဗျာ
လောလောဆယ်တော့ အုတ်ခဲ မစုနိုင်သေးလို့ အုတ်ခဲလုပ်နည်းရယ် ..
လိုအပ်တာလေးတွေ ရယ်အရင်စုဆောင်းလိုက် ဦးမယ် အကိုရာ..
ဆင်ခြင်ပြီး အသိတရား သတိတရားနဲ့
၂၀၁၂ ကနေစပြီး တိုးတက်အောင် အောင်မြင်အောင်
ဆရာသစ်ရေ ….. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ….. နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ….
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကိုသစ်မင်းရေ… မနောလည်း နိုင်သလောက် အုတ်ခဲတစ်လုံး တတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းသွားမှာပါ….
ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ မျက်စေ့ရှိတာက တော်တော်အားကျဖို့ ကောင်းနေပြီ။
ဆုံးမလွယ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ မှတ်သားထားပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမှန်လုပ် အဟုတ်ထင် နေတဲ့ စိတ်စာ ပြုပြင်ရ အတော်ခက်ပါတယ်။
နှစ်ဟောင်းနှုတ်ဆက်ရင်း..တလက်စထဲ… သတင်းစာ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ဒေါင်းလို့ရအောင် လင့်ခ်ပေးလိုက်ပါတယ်..
နောက်တခါထွက်မယ် သတင်းစာအတွက်.. အင်တာဗျူးကောင်းလေးလည်း ပါလာမယ်ဖြစ်ကြောင်း..ပြောရင်း..။
ထွက်လာသမျှ စာအုပ်တွေ အကုန်ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဗဟုသုတ ပိုရတာပေါ့ ကိုခိုင်ရယ်…။ စီစဉ်ပေးမယ်မဟုတ်လားဟင် ကျေးဇူးပဲနော်…။
မှန်တာပြောရရင် ကျွန်မ ကို ဒီဂေဇက်ထဲ ဆရာသစ် ရဲ့ စာတွေက ဆွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမှာတင် မမြင်ဘူးပေမဲ့ စိတ်ချင်း ရင်းနှီး သွားတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။
ဆရာသစ် စခဲ့တဲ့ Seminar ကနေ ရော၊ အခြား Post များကပါ ကျွန်မမှာပြင်စရာ တွေ၊ ထပ်ကြိုးစားစရာ တွေ ကို သိလာတဲ့ အပြင် ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်လူမျိုး အတွက် ပါ ဘာလုပ်ပေးရပါ့ မလဲ ဆိုတဲ့ စိတ် ပါ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအတွက် ကျွန်မ လဲ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်မ တို့ ကိုယ့်အတွက် သာမက အများ အတွက်ပါ ကောင်းအောင် ကြိုးစားနိုင်အောင် ကြိုးစားကြရအောင်ပါ။
(ကြိုးစား ၂ခု ထပ်ပြီး စာမချောတာ ခွင့်လွှတ်ကြပါ)
ဆရာသစ်၊ သူကြီးခိုင်၊ ဂေဇက်ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ အားလုံး နှင့် တစ်ကွ မြန်မာပြည်သူ/သား၊
က မ္ဘာသူ/ သား များ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျမ်းမာခြင်း လိုအင်ဆန္ဒများ နှင့်ပြည့်စုံ ကာ ၂၀၁၂ နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ ကြောင်း ဆုမွန် ခြွေလိုက်ပါရစေရှင့်။ :-)
ကိုသစ်မင်းရဲ့ ထားတတ်တဲ့စိတ်ကို လေးစားပါသည်၊ ကျမလည်း တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပါမည်။
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်………………….
အသိဥာဏ်ပညာကောင်းတွေ သိလာတဲ့အခါ ..မိတ်ဆွေတွေကိုပါ သိစေတတ်စေချင်တဲ့ သူ
“မာန” စိတ်တွေနဲ့ “ငါ” ဟာ နောင်တတွေနဲ့ပေါ့။ ကိုသစ်ရေးထားတဲ့
“ဘုရားတပည့်တော်၏ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာတို့သည် ရွံရှာဖွယ်၊ စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာအတိဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားတပည့်တော်သည် မုချမသွေသေရမည်ကို သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်
ကိုသစ်ရယ်… တီချာဖြင့် နေ့တိုင်း အဲဒီလိုရွတ်ဆိုလိုက်တိုင်း… ငယ်ငယ်တုန်းက ထားခဲဖူးတဲ့
အတ္တမာန တွေကိုတွေးမိပြီး ရှက်လိုက်တာ။ ငယ်စဉ်တုန်းက ငါသာငါထက်မာန်တွေတက်ခဲမိကြ
တာပါလား။ လုပ်ပစ်လိုက်မယ်။ ချေမွပစ်လိုက်မယ်။ ငါ့ဘာမှတ်သလဲ….အို ခုတွေးကြည့်မှ…
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဓာတ်တွေ၊ တရားမျှတတဲ့ရုပ်ပိုင်းတိုးတက်မှုတွေ ၂၀၁၂
မှာရရှိအောင်ကြိုးစားရအောင်ဆိုတဲ့ ကိုသစ် အဆိုလေးကို လေးစားစွာထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။
အတ္တမာန တွေကိုတွေးမိပြီး ရှက်လိုက်တာ။ ငယ်စဉ်တုန်းက ငါသာငါထက်မာန်တွေတက်ခဲ့မိကြ
ငယ်တုန်းကတော့ ငယ်စိတ် မာနလေးနဲ့ပေါ့။ လုပ်တိုင်းကလည်း ဖြစ်တာကိုး။ တော်ရုံဆို ပခုံးခြင်း ယှဉ်ချင်တယ် အနိုင်ယူချင်တယ်။ ငါမှငါ ဆိုပြီး တခုခုများ အကျောခံရပြီဆို ပူလောင်လိုက်တာ အိပ်မရ စားမရ မာနတွေနဲ့။ အခု အသက်လေးကြီးလာတော့ အဲ့လို တလွဲမာနတွေကို ရှက်လာတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ သတိထားပြီး ပြင်လာခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်အောင် သတိပေးပြီး နေလာခဲ့တာ အခုဆို တော်တော် စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းမှန်းသိလာတယ် ကိုသစ်မင်းရေ။
ကိုသစ်မင်းလည်း နှစ်သစ်မှာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါလို့ လိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ။ ရွာအကျိုးလည်း ဆထက်တပိုး ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ။ ရွာသူားများနဲ့ သဂျီးလည်း နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
ဓဂျီးကတော့ တငါငါနဲ့ ထောင်နေတာ မိုးပေါ်ကို တချိန်လုံးပဲ။ ဓဂျီးဂဒေါ် နှိပ်ကွပ်လိုက်မှ ပျော့ကျသွားတယ်။ မှတ်ပြီလားဓဂျီးရေ……
ကိုသစ် ဆိုလိုတာကိုနားလည်ပါတယ် ကိုသစ်စာတွေထဲက
လာမယ့် ၂၀၁၂ နှစ်သစ်ကနေစလို့တနှစ်ပတ်လုံး ကိုသစ်မင်း၊ သဂျီးနှင့်တကွ
ကိုသစ်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုများ ဖြင့်
မြူမှုန်တစ်မှုန် မှ သည် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် တက်လှမ်းနေတဲ့
ကိုသစ်မင်းရဲ့ နှစ်ကူး သ၀ဏ်လွှာလေးကတော့ တကယ့်ကို အဖိုးတန်စာစုလေးပါပဲ..
ကိုသစ်မင်း ပစ်ထားတဲ့ မြှားနှစ်စင်း ဟာ ပစ်မှတ်တွေ ဆီ မရောက်သေးပါဘူး ခင်ဗျာ
ဗေပုံ ထိပုံ ဗေပုံ ထိပုံ
ဂဇက်ရွာသူားအပေါင်းနှင့် စာဝင်ဖတ်သူများရဲ့ စိတ်ကို စာပေဖြင့်ဖမ်းစားနိုင်သူ ကိုသစ်မင်း
2012 မှသည် လာမည့်နှစ်များစွာတိုင်အောင် သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှလျက် အများအကျိုးကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ……..။
ဟုတ်ပါတယ်ကိုသစ်ရေ…တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းမိမိတို့ရဲ့ စိတ်တွေကိုပြင်၊ပြီးရင်မိမိ မိသားစု၊မိမိ ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံးပြင်သွားကြမယ်ဆိုရင် မနှေးသောအချိန်ကာလအတွင်းမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်သောတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်လာမှာ ဧကန်မလွဲပါပဲ….
ငါ ဆိုတဲ့ ငါစွဲမထား…အမြင်မတူတာတွေ ဘေးဖယ်ထား…လူသား အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီကြအောင်လား..
မရှိတာထက် မသိတာခက်၏ ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပေါ့ ….
တကယ်တော့ သိဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ် … သိသလိုလိုရှိပေမယ့် တကယ်မသိပါဘူး …
ဘယ်လိုပဲပြောပြော .. ဘယ်လိုပဲတရားချချ … မသိတာက မသိတာပါပဲ …
မှန်ပါတယ် မဝေဝေ ရေ။
ဒါ့ကြောင့်လဲ “ကြယ်ငါးအများစု” ဟာ နေပူတဲ့ သဲသောင်ပေါ်မှာဘဲ “သေ (သို့မဟုတ်) သေလု
ပြုပြင်လိုက်သောသူကတော့ ပင်လယ်ထဲပြန်ရောက်သွားသော ကြယ်ငါးတကောင်ပါဘဲ။
(ကျနော်ရည်ရွယ်တာ အဲဒီ လို ပြုပြင်နိုင်သူတယောက်ရှိရင်တောင် မြတ်တယ်လို့ပါ)
ငါ နားလည်တယ် ဆရာလာမလုပ်နဲ့ ဆိုသူများကိုမရည်ရွယ်ပါဘူး။
ဒို့ကတော့ မပြင်နိုင်ဘူးဟေ့ဆိုသူများကိုလည်း ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။
ပြင်လို့မှရဘူး ရတယ်ဆိုတာ ကျနော်ကတော့ ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒါပေမဲ့မရဘူးဆိုတဲ့ ဘောင်ထဲမှာရှိ
နေသူများကိုလည်း ကျနော် သဘောတူပေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကအဲဒီလိုယူဆခဲ့ဘူးလို့ပါဘဲ။
ကျနော်မှားခဲ့သလိုမမှားအောင် ပြန်ပြောပြတဲ့ သဘောမို့ ယူခြင်းမယူခြင်းကတော့ စိတ်ဆန္နအတိုင်းပါခင်ဗျာ။